एक शताब्दी लामो इतिहासको आँखीझ्यालका रूपमा प्रेरणादायी रहेको गिरिश गिरीद्वारा लिखित ‘सत्यमोहन’ नामक आत्मकथात्मक कृतिलाई ‘उत्तमशान्ति पुरस्कार’ प्राप्त गर्ने भएको छ ।
उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठीले २०७८ सालको ‘उत्तमशान्ति पुरस्कार’का निम्ति २०७८ सालभरिमा प्रकाशित भएका गैरआख्यान कृतिहरूमध्ये ‘सत्यमोहन’ कृतिलाई छनौट गरेको हो । वरिष्ठ लेखक तथा समालोचकहरू संलग्न समितिले पुरस्कारका लागि चयन गरेको हो ।
२६ वर्षको उमेरमै ‘श्रष्टा र साहित्य’ नामक पुस्तकका लागि मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका साहित्यिक पत्रकार उत्तम कुँवरको ४३ वर्षकै उमेरमा २०३९ सालमा निधन भएको थियो । तिनै प्रख्यात साहित्यिक पत्रकार उत्तम कुँवरको स्मृतिमा निजकी धर्मपत्नी स्व. शान्ति कुँवरद्वारा वि.सं. २०४४ सालमा स्थापित ‘उत्तम कुँवर स्मारक पुरस्कार गुठी’ ले आख्यानमुक्त गद्यकृतिलाई २०४४ सालदेखि नै ‘उत्तमशान्ति पुरस्कार’ प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
पुरस्कारको राशी १ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पुरस्कार यही जेठ १२ गते समर्पण गरिने गुठीद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।